सच्चा, गहिरो, सबै-अवशोषित प्रेमको सपना कसैको लागि हरेक व्यक्तिमा पुग्छ। केही यस्ता विचारहरू 16 वर्षको उमेरमा भ्रमण गरिएका छन्, अरूले यसलाई लगभग साढे 40 सम्म मात्र सोच्न सक्छन्, र तेस्रो र केवल पुरानो उमेरका लागि मात्र उनीहरूले वास्तविक भावनाको लागि पालना गर्न थाले। कसरी प्रेम पाउन सक्नु हुन्छ वास्तविक हुनेछ?
सबैभन्दा पहिले, त्यहाँ सानो सिद्धान्त छ। प्रेमको प्रकार धेरै वर्णन गरिएको छ कि यो समस्यामा गम्भीर स्रोतहरू पढ्ने, हराउन सजिलो छ। प्राय: दुई प्रकारका उच्च भावनाहरू विरोध हुन्छन्: एरिक र एपपे। तर वास्तवमा, आधुनिक स्रोतहरूले कम्तिमा 8 प्रकारको प्रेमलाई आवंटित गर्दछ। हामी केवल दुई उल्लेखको बारेमा बताउनेछौं। Agape संग सुरु गरौं, जुन सबैभन्दा "महान" प्रेमको रूपमा मानिन्छ। यस प्रकारले उच्च बलिदान, भक्ति, निरन्तर प्रतिबिम्ब मान्दछ कि तपाइँको प्रियलाई कसरी खुसी पार्छ। मसीही स्रोतहरूले यस्तो दयालु प्रेमलाई बोलाउँछन्। व्यवहारमा, मानव जीवनमा शुद्ध एपपे लगभग कहिल्यै भेटिएन, किनकी यो पुरा तरिकाले विच्छेद हुनु पर्छ। यो विश्वास छ कि केवल परमेश्वरले मात्र मानिसलाई माया गर्न सक्नुहुनेछ । एरोस - पार्थिव प्रेम, एक कामुक भावना र प्रिय प्रेम को शारीरिक आकर्षण को लागि महान ध्यान को द्वारा विशेषता छ। यो यस्तो प्रेम हो जुन ठूलो संस्कृतिले तीव्रता बढायो । निस्सन्देह, ईर्रो आफैले प्रेम गरिन केही खराब छैन। तर यदि तपाईं एक कार्य "कसरी साँचो प्रेम पत्ता लगाउने" सेट गर्नुभयो भने तपाईले यसलाई यसलाई आदर्शको रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। यो एक आदर्श को लागी एक आदर्श प्रेम एपाप को लागी राम्रो छ।
सामान्यमा, प्रश्न "कसरी प्रेम खोज्ने?" सही ढंगले प्रस्तुत गरिएको छैन। आखिर, साँचो भावना खोजी गरिएन, यो सिर्जना गरिएको छ। यसैले, प्रश्न एक फरक फरक तरिकाले सुधारिएको हुनुपर्छ, "तपाईंले गहिरो, भरोसा र गहिरो सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्नुहुने साझेदार कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ?" तर तपाईले व्यक्तिगत तवरमा निर्भर गर्दछ, तपाईले आफ्नो क्षमता र सम्बन्ध निर्माण गर्न तत्परतामा निर्भर गर्दछ। र त्यसपछि यो प्रश्न हुनेछ: "सच्चा प्रेम भनिने योग्यताको सम्बन्ध बनाउन मलाई के गर्न आवश्यक छ?" हामी दुवै प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छौं।
साझेदार पत्ता लगाउने, यदि पारंपरिक तरिका जस्तै साथीहरु र साथीहरु को बीच खोज मा मदद नहीं गर्छन? इन्टरनेटमा हेर्नुहोस्। एक राम्रो विकल्प - अन्तर्राष्ट्रियहरू सहित डेटिङ साइटहरू। तथ्य यो छ कि अन्तर्राष्ट्रिय साइटहरुमा रोचक मान्छे को छनौट अधिक व्यापक छ। एक रोचक "घरेलु" उम्मेदवारी (उम्मेदवार) को दस वा बीस विदेशी उम्मेदवार हुनेछ। संसार ठूलो छ, तपाईंलाई रूसी बोल्ने साथी र केटीहरूमा सीमित हुनु आवश्यक छैन। निस्सन्देह, सबै को भाषा जान्न सजिलो छैन। तर सबै पछि, कुनै पनि मामला मा एक नयाँ भाषा, तपाईंलाई चाहिन्छ, यो क्यारियर र उपयोगीको लागि हो, र विकासको लागि। साँचो प्रेमले बल र समयको लगानीलाई आवश्यक छ। के तपाईं केहि गर्न को लागी तयार हुनुहुन्छ? खैर, भाषा कुञ्जीहरू लिनुहोस्। तर डेटिङ साइटहरूमा मात्र सीमित नगर्नुहोस्। त्यहाँ इन्टरनेट, विषयगत फोरममा रूचिहरू पनि क्लब छन्। तपाईं एक जस्तै व्यक्तिलाई फेला पार्न सक्ने व्यक्ति फेला पार्न सक्नुहुनेछ, र समान रुचिहरूले लगभग कुरा गर्नुहुने कुराको बारेमा केहि कुरा गर्नुपर्नेछ।
राम्रो साझेदारसँग सम्बन्ध बनाउनको लागि तपाईंलाई के गर्न आवश्यक छ? सबैभन्दा पहिला, क्षमा गर्न सिक्न। यहां सम्म कि सबै सम्मोहक जोडीहरुमा असहमति र झगडा हो। त्यसकारण, क्षमा गर्न र एक असल सम्बन्ध बिर्सनुको कारण तपाई निर्माण गर्नुहुन्न। तपाईंसँग पहिले नै भएका प्रियजनहरूसँग सम्बन्धमा ट्रेन गर्नुहोस्। जब तपाईंको अवस्थित सम्बन्ध सुधार हुनेछैन, साझेदार खोजी सुरु गर्न कुनै बिन्दु छैन र तपाइँलाई "कसरी खोज्ने प्रेम।" प्रश्नको बारेमा बिर्सनु पर्दछ। जब सम्बन्ध सुधार हुन्छ, तपाईं अर्को चरणमा सार्न सक्नुहुन्छ: आफैलाई नजिकैको मानिसलाई प्रसन्न तुल्याउने तरिकाहरू खोज्न आफैलाई तालिम दिनुहोस्। यो निष्पक्ष सुखद शब्दहरू, सानो, गैर-कमिटि उपहारहरू वा कथाहरू तेस्रो व्यक्तिहरू (गपशप विपरीत) को सकारात्मक तरिकामा हुन सक्छ। अझै पनि मान्छे मा राम्रो हेर्न को लागी सिक्न आवश्यक छ, यसले तपाईंलाई विभिन्न तरिकामा संसारलाई मद्दत गर्नेछ र यो मानिसहरूलाई धेरै आकर्षक छ, त्यसैले यो तपाईंको प्रेम खोज्न सजिलो हुनेछ। तल बस्नुहोस् र कागजको पानामा कम्तीमा 10 को उत्कृष्ट गुणहरू लेख्नुहोस् जसको साथ तपाइँले यसलाई गाह्रो पार्नु भएको छ। यो एक असाधारण प्रशिक्षण र तयारी हुनेछ यो तथ्यको लागि कि तपाइँ आफ्नो भविष्य चयन गरिएको एक वा तपाईको छनौट एक मनपर्छ।
कसरी प्रेम पत्ता लगाउने? केवल आफ्नो खोजको भौगोलिक विस्तार गर्नुहोस् र आफैमा काम सुरु गर्नुहोस्। र चाँडो त्यहाँ एक हुनेछ तपाईं सबै आफ्नो जीवनको लागि प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ।
केटीलाई भेट्न निमन्त्रणा कसरी राम्रो छ?
उत्पादन प्रमुख को नौकरी विवरण, उत्पादन विभाग को प्रमुख, उत्पादन को उप प्रमुख
किशोर आफ्नो अधिकार आनन्द उठाउन सक्छौं? उमेर द्वारा पदवर्णन अधिकार
"सही कुल" - को विस्फोटक युवा कमेडी
मानिसहरू मा Progesterone: आदर्श, ogranizm मा विकृति र प्रभाव
देशमा को असीमित लगातार प्रयोग गर्ने अधिकार
विकास प्रबन्धक। के यस्तो स्थिति को जिम्मेवारी implies छन्
मार्गदर्शन: पर्खाल सकेट देखि एक सकेट कसरी सञ्चालन गर्न। अपार्टमेंट मा ताराहरु